FANAFIHANA TAO BEMANONGA : Mpanara-dia 1 maty, 5 hafa naratra mafy, lasa ny omby 35 isa
Mandravarava hatrany ankehitriny ireo dahalo manodidina ny Faritra Menabe. Tao Marovoay Kaominina Bemanonga Distrikan’i Morondava indray no fantatra fa lasibatra ny alatsinainy alina lasa teo ka mpanara-dia iray no voalaza fa lavon’ny bala, olona dimy hafa naratra mafy. 10 octobre 2018
Ankoatra izay fifandonana izay dia voangona tamin’ny tatitra voarainay omaly fa omby miisa 35 lasan’ireo malaso no mbola tsy nisy tafaverina. Mbola mitohy araka izany ny fanarahan-dia sy fiambenana ny kizo rehetra ao an-toerana. Dahalo mitam-basy miisa fito no tonga nanao ny fandravana ny fananan’ireo mponina tao an-toerana ka noho ny tsy fitovian-kery dia nahazo vahana izy ireo namoaka ny omby tao am-bala. Nohamarinin’ny fokonolona fa basy vita gasy miisa dimy no fitaovana nentin’ireo olon-dratsy niarovan-tena.
Tamin’ny fotoana nanatanterahana ny fanarahan-dia no raikitra ny fifampitifirana. Teo no nahavoa ireo olona naratra mafy sy nindaosin’ny fahafatesana. Soa ihany fa mba nalaky tonga ny mpitandro filaminana nana-mpy azy ireo tamin’ny fikarohana ny olon-dratsy hatramin’ny omaly. Avy hatrany dia noentina tao amin’ny Hopitalibe Namahora Morondava moa ireo naratra mafy ireo.
Efa manomboka fantatra ireo nandroba, mitohy ny fikarohana
Leo tanteraka ny fampihorohoroana ataon’ireo malaso ao anatin’ny Faritra Menabe ny mponina, eo anatrehan’izany indrindra dia niara-nisalahy ireto farany ny amin’ny fikarohana azy fito lahy ka tsy hanaiky mora ny zava-misy. Raha ny voalazan’i Maharo Jean, Filohan’ny Dinabe ao an-toerana dia efa mihafantatra tsikelikely ny toerana fieren’ireo dahalo nitondra ny omby nangalariny saingy mbola mametraka vela-pandrika mba hahamora foana ny fifanenjehana. Efa nisy nahatazana rahateo koa fa nandalo tao amin’ny tanànan’i Manambaliha ireo olon-dratsy.
Nifampizara avy hatrany noho izany ny vatan-dehilahy ka ao ny miambina ny lalana mihazo an’i Bevoay, ao ireo miambina ny lalana mihazo an’i Betsiriry mba hanatratrarana haingana ny dian’ireto mpandrava. Manao antso avo hatrany ny mpitandro filaminana ny amin’ny fifampizaràna vaovao marim-pototra, amin’izay vetivety foana dia voasambotra ireo mpanapotika ny fananan’olona. Marihina fa i Menabe dia isany faritra masiaka amin’ny tsy fandriampahalemana indrindra eto Madagasikara.
Telo mianadahy efa nahazo 160 tapitrisa Ariary nadoboka am-ponja vonjimaika FISOLOKIANA (124) 18 juin 2019 Niakatra Fitsarana ireo zandary telo voarohirohy KOLIKOLY TENY AMIN’NY LALAM-PIRENENA RN4 (107) 17 juin 2019 Nahazo ny maro an’isa ny kandidà avy amin’ny IRD VOKATRA VONJIMAIKA FENO NAVOAKAN’NY CENI (87) 18 juin 2019 Depiote teo aloha miisa 50 no ho tafaverina raha tsy miova tamin’ny voka-pifidianana ANTEMIERAM-PIRENENA (86) 18 juin 2019 Tratra ny mpamily kamiao nitondra entana halatra milanja 8 taonina ASAN-JIOLAHY TOAMASINA (85) 18 juin 2019 Natontongan’ny IRD ny TIM tao Vakinankaratra FIFIDIANANA DEPIOTE ANTSIRABE II (82) 18 juin 2019